Manombana ny Hoavy Ambany Fitarihan’ny Governora Rosselló sy ny Filoha Trump ny Pôrtô Rikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2016 5:18 GMT
Fandravahana nataon'i Kike Estrada. Nahazoana alalana.
Tamin'ny 8 Novambra, nambara ho mpandresy tamin'ny fifidianana tao Pôrtô Rikô ny kandidà Ricardo Rosselló mpanohana ny fampijoroana ho fanjakana [etazonia]. Manana fijery mitana ny nentin-drazana mitovy amin'ny an'ilay filoha voafidy ao Etazonia Donald Trump i Rosselló ary manontany tena ny PôrtôRikana mpikatroky ny zon'olombelona hoe ho tahaka ny ahoana ny fiantraikan'ny politikam-pitantanam-pitondrany ao amin'ny vondro-nosy, ao anatin'izany ny zon'ny vehivavy, ny olona manana fahasembanana, mpifindra-monina, ary ny vondrona LGBT. Mampiahiahy ihany koa, mazava ho azy, ny tsy fahamarinan-toeran'ny toekarenan'i Pôrtô Rikô.
Nandany ny tontolo andron'ny alarobia 9 novambra tao anatin'ny fisaonana ny mpitsikera an'i Trump. Nisy ihany koa izany toe-javatra izany tao Pôrtô Rikô, ao anatin'ny sisintanin'i Etazonia izay mizaka ny zom-pirenen'i Etazonia ny mponina ao aminy saingy tsy afa-mifidy amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena, raha tsy hoe monina ao amin'ny iray amin'ny fanjakana 50 mandrafitra an'i Etazonia.
Rosselló dia filohan'ny Antoko Liam-Pandrosoana Vaovao, izay mijoro hahatonga an'i Pôrtô Rikô ho fanjakana [mandrafitra an'i Etazonia], ary zanakalahin'i governora PôrtôRikana teo aloha nampieli-patrana ny kolikoly nandritra ny fitantanan-draharahany. Rehefa nandresy tamin'ny isanjato tery dia tery 41,8 isanjato i Rosselló dia nanambara fa hotohizan'ny fitantanan-draharahany hatrany ny hanaovany ho vaindohan-draharaha ny hanaovana ny nosy ho fanjakana. Na dia demaokraty aza i Rosselló, ny programa politikany kosa miara-milahatra amin'ny Antoko Repoblikana ao Etazonia. Efa nivonona ny hanohana hanao izay haha-fanjakana an'i Pôrtô Rikô ny sehatry ny Antoko Repoblikana (na dia tsy nety tontosa aza izany nandritra ny fitantanan-draharaha repoblikana teo aloha). Nampanantena ihany koa izy ny hiara-hiasa amin'ny Filakevi-Pitantanan-Ketra napetrak'i Etazonia hifampiraharaha amin'ny trosan'i Pôrtô Rikô.
Ny mpifanandrina voalohany tamin'i Roselló, i David Bernier (avy amin'ny antoko mpanohana ny Commonwealth), kosa dia resy tamin'ny 38,9 isanjaton'ny vato. Ny ambin'ny vato kosa nanohana ireo kandidà mahaleotena sy ireo mpikambana hafa mpanohana ny fahaleovantena avy amin'ny Partido Independentista Puertorriqueño sy ny Partido del Pueblo Trabajador, nahazo ny 19,3 isanjaton'ny vato.
Tao amin'ny antenimieran-doholona kosa anefa mandritra izany fotoana izany dia nahazo toerana ny kandidà mahaleotena sy mpanohana ny fahaleovantena.
Rariny eo amin'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ary ny fiarahamonina LGBTQ
Mety ahitsy na foanana ao ambany fitantanan-draharahan'ny Antoko Liampandrosoana Vaovao, araka ny fanamarihana taloha efa nataon'i Rosselló ny fandaharam-pianarana momba ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, izay efa nankatoavin'ny Departemantan'ny Fanabeazana ao Pôrtô Rikô. Nilaza kosa anefa ny mpanabe, fa ahitana fandrosoana amin'ny tolona ho fiarovana ny zon'olombelona sy ny taona maro nanandratan'ireo hetsika sosialy isan-karazany feo ilay fandaharam-pianarana. Efa nampidirin'ny departemanta tamin'ny herintaona ireo tanjona isan-karazan'ny programa sy ireo fitaovam-pitarihana ho an'ny mpampianatra eny amin'ny sekolim-panjakana :
Mifantoka amin'ny famakafakana iray manokana ny fanabeazana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy: lalana iray vaovao ijerena ny zavamisy manampy antsika hieritreritra indray ny fanorenana ara-kolontsaina sy sosialy eo amin'ny fametrahana ny anjara toeran'ny lahy sy ny vavy izay miantraika amin'ny fiarahantsika monina. Kasainay ny hisoroka ny hantsana eo amin'ny fiarahamonintsika, sy hamarana ny fanavakavahana, tsy eo amin'ny lahy sy ny vavy na ny hafa ihany, fa eo amin'ny fahasamihafana, fiaviam-pirenena, fivavahana na foto-kevitra politika, ankoatra ny hafa, ary hampiroborobo ny fampandrosoana ny mahaolona feno, mahaleotena tsy misy idiran'ny mahalahy na vavy na hafa azy.
Ricardo Rosselló nandritra ny valan-dresaka. Dikasary avy amin'ny lahatsary YouTube NotiCel: https://www.youtube.com/watch?v=mVVSRFeQPI4.
Taorian'ny nahalaniany, nanambara i Rosselló fa tsy hanafoana ny lalàna nampiasaina hampidirana ny fandaharam-pianarana vaovao izy, saingy efa nampanantena izy fa hanitsy ny fandaharam-pianarana vaovao momba ny fitovian'ny lahy sy ny vavy hifanaraka amin'ny soatoavina sy ny vinan'ny fitantanan-draharahany.
Naneho ny ahiahiny amin'ny planin'i Rosselló izay nilaza fa fahavalon'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ nefa tsy nahatafita ny tena mahazavadehibe ity fandaharam-pianarana ity i José Rodríguez Irizarry, mpandrindra ny Proyecto Instituto del Género y Educación de Avanzada (Tetikasam-Panabeazana Ambony sy Ivotoeran'ny Miralenta.
Mandritra zany fotoana izany ny kandidàn'ny Partido del Pueblo Trabajador (PPT) sady mpisolovava rahateo antsoina hoe Mariana Nogales Molinelli namoaka fanambarana tao amin'ny pejy Facebook nanitrikitrika ny fanoheran'ny antokony ny kabary fankahalam-bahiny, fankahalam-behivavy ary fankahalam-pelaka ataon'ny filoha voafidy Donald Trump. nohamafisin'i Nogales Molinelli fa hiasa hisian'ny fiarahamonina anjakan'ny rariny izy sy ny antokony:
Zaza fotsy hoditra mihiaka “atsangano ny rindrina” amin'ny Meksikana mpiara-mianatra aminy, ary misy tanora pelaka iray nisy nanafika. Misy ireo mihiakiaka manompa avy eny ambony fiarany ary misy aza mandrahona olona noho ny volo-kodiny na ny fiaviana sy fivavahana misy azy. Nisokatra avy amin'ny ohatra ratsin'i Trump ny fanavakavaham-bolonkoditra, ary ankehitriny ahoana no hifehezantsika izao fankahalana sy fanilikilihana izao? […] Averina indray mandeha indray, natsangana ny sokajy iray ambony: lehilahy, fotsy, Kristiana, lahy tia vavy na vavy tia lahy. Mifangarika amin'ny fahasamihafana sy fanoherana ny vehivavy […] Tsy misy zavatra ratsy indrindra mihoatra noho ny tsy fimiran-danja sy ny fanavakavahana. Hanohy ny asanay amin'ny hisian'ny fiarahamonina anjakan'ny rariny sy hitsiny izay laharam-pahamehana ao aminy ny fahasamihafana sy ny fahamendrehan'ny olombelona izahay.
Ny toekarena, ny fahefana mpanatanteraka ary i Óscar López Rivera
Tany amin'ny fiandohan'ity taona ity, nosoniavin'ny Filoha Obama ny lalàna PROMESA, manangana ny Filakevi-Pitantanan-Ketra, vondron'olona “mpahairaha” amin'ny politikam-panaovan-dalàna sy ny fiadidiana ny vola tsy voafidy, tompon'andraikitra amin'ny fitantanana sy ny fandidiana sy fanapahana amin'ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny toekaren'i Pôrtô Rikô. Nolavin'i Trump ny hamenoana ny kitapom-bola raha nanontaniana ny amin'ny trosan'ny Commonwealth izy tao amin'ny antsafan'ny CNN, nilaza fa declaring that Puerto Rico “be loatra ny trosan'i Pôrtô Rikô, ka tsy vitan'ny fanitsian-drafitra fotsiny ihany.” Nataon'ireo mpikatroka any ifotony mazava ny fitakian'izy ireo nandritra ny androm-pifidianana, rehefa nanao diabe teo ivelan'ny Havoanan'ny Capitol ao Pôrtô Rikô ry zareo, tamin'ny filazana hoe “Se acabaron las promesas” (Tapitra ny fampanantenana) ho fifaharana hanoherana ny Filakevi-Panarahamaso sy ny fahefana goavana ananany.
Namoaka lahatsary tao amin'ny Facebook, namoaka ny fandraisany manokana ny fifidianana tao Etazonia i Angel R. Rosa, profesora sady mpamakafaka politika avy ao amin'ny Oniversiten'i Pôrtô Rikô. Navoitran'i Rosa fa, raha ara-drariny ny hakiviana tamin'ny fandresen'i Trump, dia tsy maintsy azon'ny mpitsikera fa namboarina ho tsy misy andrim-panjakana hanana fahefana feno manoloana ny hafa ny rafitra politika ao Etazonia. Nanome toky ny mpamaky izy fa mila fankatoavana avy amin'ny Kongresy avokoa ny fanapahan-kevitra tsirairay, vitsy anefa ny Latino mpikambana mavitrika ao amin'io Andrim-panjakana iray io. Ny Repoblikana no mahazo ny maro an'isa ao amin'ny Antenimiera sy ny Loholona, ka mahamora ny fankatoavana ireo politika mpandala ny nentin-drazana eo ambany fitarihan'i Trump.
Maro amin'ireo PôrtôRikana ihany koa no te-hahafantatra raha hihevitra amin'ny famotsorana an'i Óscar López Rivera, gadra politika ny Filoha Obama. Ny roa volana farany amin'ny fitondran'i Obama no vintana farany hamotsorana azy satria tsy azo antenaina amin'ny hamoahana azy mihitsy ny Repoblikana. Misy fanangonan-tsonia amin'izany ao amin'ny tranonkalan'ny Trano Fotsy, ary raha mahazo sonia 100.000 izany tao anatin'ny 30 andro, dia takiana ny governemanta hamaha ity raharaha ity. Tamin'ny fotoana nandikana ny lahatsoratra, dia 4303 sisa ny sonia notadiavina [raha io isa 4300 io indray no voaangona tamin'ny nanoratana ny teny anglisy, fifanandrifian-javatra tsy misy tahaka izany].
Mpanao fihetsiketsehana ao San Juan, Porto Riko manohitra ny lalàna PROMESA tamin'ny 8 Novambra 2016. Saripika nalain'i Ricardo J. Rodríguez Ríos. Nahazoana alalana.